China pp hollow sheet, mpanamboatra taratasy miendrika pp sy mpamatsy | Sihai
Pp hollow sheet (Polypropylene Hollow Corrugated Plastika Sheet) dia ravina rindrina kambana avoakan'ny rindrina roa misy rindrina roa mifamatotra amin'ny taolan-tehezana mitsangana. Ny takelaka poakaty dia fantatra ihany koa ho toy ny ravin-tsolika pp, tabilao mihosona, tabilao misy pollow, taratasy corflute pp, tabilao flute, sheet correx pp ary sheet coroplast pp. pp hollow sheet dia amboarina avy amin'ny polypropylene co-polymer (PP) misy fiantraikany be, izay azo averina ahodina, azo sasana, maharitra ary azo ampiasaina sns sns. Ny polypropylene PP hollow flute corrugated plastika plastika / birao dia nanaporofo fa mety amin'ny fampiasana fonosana , doka, fananganana, fambolena, indostria ary fanafody sns.
Afaka namboarina ho vita ny hatevin'ny 2mm -12mm, matetika, ny hatevin'ny 2-5mm no tena ampiasaina amin'ny vokatra fonosana, ary ny hatevin'ny 4-6mm dia ampiasaina amin'ny doka, araky ny fampiharana samihafa, ny GSM dia azo amboarina, ny avo GSM ny tabilao matanjaka. Pp hollow sheet dia fitaovana vaovao azo ampiasaina amin'ny karazana indostria rehetra, fitaovana azo ovaina azo namboarina natao tamin'ny endriny rehetra, habe rehetra. Ny ravina pp hollow arakaraka ny fampiharana samihafa, azo anaovana tabilao pp retardant pp, ESD pp ravina mitafo, ary UV miaro pp hollow pp, afaka manao fitsaboana corona amin'ny fanaovana pirinty ihany koa izy.
2-12mm pp ravina loaka, pp famaritana taratasy mihombo
hateviny 2mm 3mm 4mm 5mm 6mm 7mm 8mm 9-10mm 11mm 12mm
Loko sy habe Loko namboarina, habe namboarina (halavan'ny 2300mm, ny halavany rehetra)
Tombontsoa poakaty PP:
1) Mavesatra maivana
2) Tsy manan-tsiny, tsy misy tsiro, tsy misy loto
3) Tsy tantera-drano, mahazaka hamandoana
4) mahazaka tohina, mahatanty maharitra, mahazaka harafesina, insulation hafanana
5) Fanodinana tontolo iainana-friendly
6) Loko marobe, habe namboarina, fampiasana malefaka
Ny takelaka poakaty PP dia manana lanja maivana, matanjaka, hatevin'ny fanamiana, ambonin-malama, fanoherana ny hafanana tsara, tanjaka mekanika avo lenta, fitoniana simika tsara sy insulation elektrika, toetra tsy misy poizina. Izy io dia mety arakaraka ny fampiharana isan-karazany manampy ESD fitaovana vita ESD pp ravina ravina, ampio UV fitaovana natao UV miaro pp mitafo lamba sy ny sisa. Noho izany dia fitaovana mora azo ampiasaina amin'ny karazana indostria rehetra izy io.
Fampiharana lamba mihombo PP:
1. fihodinan'ny vokatra indostrialy: boaty fivezivezana fonosana, boaty fitehirizana, boaty fitahirizam-bokatra, fitoeram-pivarotana, boaty fandefasana, boaty famonosana, boaty ESD, boaty fametahana ESD, boaty elektronika fonosana fametahana, boaty fihodinan'ny plastika, fizarana boaty, tabilao misy ESD boaty fiovana, boaty famindrana banga conductive.
2. Case sy kitapo mpanohana kitapo: tabilao fisaka sy kitapo misy kitapo, kitapo fisoloana kitapo sy kitapo, tabilao fisarahana.
3. tavoahangy, indostria fihodinana landy: sosona tavoahangy fitaratra, fonosana tavoahangy labiera, fonosana vokatra vita amin'ny landy, landy vita amin'ny landy, fisarahana tavoahangy, firakotra lamba firakotra, paoma famonosana
4. Indostrian'ny milina: pad cushion milina, faritra plastika masinina, fizarazaran'ireo masinina.
5. Indostrian'ny dokam-barotra: boaty fampisehoana tabilao PP, boaty fampisehoana, tabilao dokambarotra, tabilao corona, famantarana coroplast, tabilao, boaty fampisehoana, famantarana famantarana mitafo, pp fanaovana dokambarotra taratasy hollow
6. Haingon-trano: birao valindrihana, ravina grille, fizarazaran-trano fidiovana, boaty fitehirizana, kaontenera fitehirizana
7. indostrian'ny fanaka: tabilaon'ny latabatra dite, tabilao fanaingoana fanaka.
8. Fambolena: boaty voankazo isan-karazany, boaty legioma, boaty famonoana bibikely, boaty sakafo, boaty zava-pisotro; Tafon-trano.
9. Vokatra fametahana sy fanatanjahantena: solaitrabe maranitra, kitapo fisie, boaty fisie.
10. Indostrian'ny fiara: familiana kodiarana, lovia vodi-fiara, sosona, fizarana fizarana fiara, boaty famadihana fiara, boaty fitehirizana fiara
11. indostrian'ny herinaratra: lamosin'ny vata fampangatsiahana, tabilao fanasan-damba, fisarahana amin'ny vata fampangatsiahana.
12. Vokatry ny zaza: faritra misy buggy, valizy any ambony buggy, cushion buggy, sakana manan-tsaina ho an'ny ankizy.
PP hollow sheet dia be mpampiasa, ny sehatry ny fampiharana amin'ny fidirana tsy tapaka, ny ampahany novolavolaina fotsiny, misy faritra maro novolavolaina.
Fampiharana takelaka plastika PP plastika:
1. Birao fanaovana doka;
2. boaty fanodinam-bokatra, ao anatin'izany ny boaty fanodinana, boaty fiovana, boaty fonosana legioma sy voankazo, boaty fitehirizana akanjo, ary boaty fametahana ho an'ny indostria isan-karazany;
3. Birao indostrialy, ao anatin'izany ny fiarovana ny fonosana ivelany sy ny tariby, ny vera, ny takelaka vy, ny entana isan-karazany miaro amin'ny fonosana ivelany, ny pads, ny racks, ny partitions, ny plate ambany, ny carte de compart sns sns.
4. Ny birao fiarovana, ny vanim-potoanan'ny fampiasana baoritra sy gitara telo hiarovana ny akora fananganana amin'ny fanamboarana dia lasa. Miaraka amin'ny fivoaran'ny fotoana sy ny fanatsarana ny tsiro, amarino tsara fa ny famolavolana haingo dia feno alohan'ny fahavitan'ny fananganana sy ny fiarovana sahaza tokony homena mba hitazomana ny asa Toekarena, fiarovana sy fanamorana ary fiarovana amin'ny fananganana ascenseur sy gorodona alohan'ny fanekena .
Previous: pp partiton mihombo
Manaraka: pp boaty fanodinana onja